Waa Kuwee Afarta Ciyaartoy Ee Kooxda Kowaad Ee Barcelona Ka Tirsan Ee Barri Camp Nou Laga Fasaxayaa?. - Gool24.Net
Waa Kuwee Afarta Ciyaartoy Ee Kooxda Kowaad Ee Barcelona Ka Tirsan Ee Barri Camp Nou Laga Fasaxayaa?.
Kooxda Barcelona ayaa haddaba kooxdeeda ka dirtay Jasper Cillessen iyo Andre Gomes oo ay ka heshay lacag 60 milyan yuro ku dhaw laakiin barri waxay Barca kooxdeeda ka diraysaa afar ciyaartoy oo kooxda kowaad ka tirsanaa.
Caawa saqda dhexe waxaa xisaab ahaan u kala wareegaya xili ciyaareedkii la soo dhaafay iyo xisaabta xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 waxayna Barca barri dareemi doontaa in ay garbaheeda culays wayn ka tuurtay.
Barri oo ay isniin tahay waxay taariikhdu noqonaysaa July 1,2019 waana maalinta kowaad ee uu si rasmi ah u furmayo suuqa xagaaga ee kooxaha loo ogol yahay in ay saxiixyo diwaan gashan karaan.
Laakiin waxay sidoo kale maalintani ku calaamadsan tahay maalinta ay dhacaan heshiisyada ciyaartoyda ee ay si xor ah kooxaha ay doonayaan ugu biiraan.
Ugu horayn waxaa Barcelona ka bixi doona difaaca dhexe ee Thomas Vermaelen kaas oo waqti adag ku soo qaatay Camp Nou waxayna Barcelona go’aan ku gaadhay in ayna heshiiskiisa cusboonaysiin.
Difaaca reer Belgium ee Thomas Vermaelen ayay Barcelona la soo saxiixatay sanadkii 2014 kii markaas oo ay Arsenal kala soo wareegtay isaga oo dhaawac qabay kaas oo uu waqti aad u dheer la maqnaa.
Thomas Vermaelen waxa uu ahaa ciyaartoyga isaga oo aan taaban kubbada Champions league haddana ku soo guulaystay bilada koobkan wuxuuna kooxda la soo qaaday koobab badan oo aanu tacab ka galin.
Sidaa daraadeed, heshiiska Thomas Vermaelen ayaa caawa saqda dhexe dhacaya wuxuuna barri ku bixi karaa si xor ah isaga oo kooxda uu doono ku biiri kara.
Waxa kale oo barri kooxda Barcelona ka bixi doona ciyaartoydii ay bishii January amaahda lama filaanka ah ku soo qaadatay ee Jeison Murillo iyo Kevin-Prince Boateng kuwaas oo aan wax la taaban karo soo kordhin waxaana dhamaaday heshiiskii amaahda ahaa ee ay Camp Nou ku joogeen.
Xidiga afraad ee ay Barcelona barri kooxdeeda ka diri doontaa waa mid culayska ugu wayn ku soo hayay waana Douglas Pereira kaas oo aan wax saamayn ah Barca ku yeelan tan iyo maalintii uu Camp Nou soo gaadhay.
Douglas Pereira waxa uu dibad wareeg ku ahaa amaah uu hadba koox ugu maqnaa, laakiin ugu danbayn barri waxay maamulka Barca heli doonaan dariiq ay kaga nastaan culayskii mushaar ee uu Douglas Pereira kooxda ku soo hayay.
Barri waxay Barcelona si rasmi ah u diwaan galin kartaa saxiixyada cusub ee Frenkie De Jong iyo goolhaye Neto oo ay Valencia isdhaafsadeen Cillesen.